MAGDHOWGA SHAQO LA'AANTA XANUUNKA EE FADARAALKA (MSLXF)
Magdowga Shaqo la'aanta Xanuunka ee Fadaraalka (MSLXF) waa barnaamijka hoos yimaada Caawimada Karoonfayras, Tabarucaadka, iyo Xeerka Ilaalinta Dhaqaalaha (CARES) ee 2020 oo siinaya lacag dheeraada shakhsiyaadka helaaya lacag siinta shaqo la'aanta heer gobol iyo fadaraal. Waxa maalgalisay dawlada fadaraalka, maaha cashuurta shaqo la'aanta gobolka ee ay bixiyaan shaqaaleysiiyayaashu.
MAGDHOWGA SHAQO LA'AANTA XANUUNKA EE FADARAALKA (MSLXF):
Lacag dhan $600 oo dheeriya todobaadkii loogu talo galay dhamaan kuwa usoo gudbay faa'idooyinka shaqo la'aanta cusub ama jiray, oo ay ka mid yihiin caymiska shaqo la'aanta (CS), Magdhowga Shaqo la'aanta ee shaqaalaha fadaraalka (SLF), Magdhowga Shaqo la'aanta ee Shaqaalihii hore (MSLS), Magdhowga Xaalada Degdega ah ee Shaqo La'aanta (MXDS), Caawimada Shaqo La'aanta (CS), Faa'idooyinka Fidsan (FF), Magdhowga Mudada Kooba/Mutadawacnimada Shaqada Lawadaago (MMK/MSL), Caawimada Hagaajinta Ganacsiga (CHG), iyo acagta Caawimada Masiibada Shaqo La'aanta (LCMS). Barnaamijyada aan heli doonin FPUC waa Faa'idooyinka Tababar Fidsan (TEB), iyo Xidhitaanka Ganacsiga.
Taariikhda Bilowga: Maarij020 (todobaadka ku dhamaanaya Abril 4, 2020)
Taariikhda dhamaadka: Todobaadka ku dhamaanaya Julaay 25, 2020
DIGNIINTA WAX ISDABAMARINTA!
Hadii aad ku talo gal u sameysid ama u ugu kaliftid qof kale inuu sameeyo bayaan been ah ama si ku talo gal ah ugu guul daraysto ama ku kalifo inuu qof kale ku guul daraysto inuu sheego xaqiiqada agabkaiyo, natiijadaasi, helo Magdhowga Shaqo La'aanta ee Fadaraalka oo aanad xaq u lahayn, waxa ku qaban doonaa xukunka hoos yimaada 19 qeybta 1001 ciwaanka 18, Xeerka Mareykanka. Qofka lagu helo inuu galay wax isdaba marin oo intaasi ka dib laga saaro todobaad (ama todobaado) caymiska shaqo la'aanta oo ay ku jirto lacagta FPUC kuma haboonaan doono inuu helo lacago dheeraada oo FPUC mustqabalka ka dib ka saaritaanka.
Ka tagista shaqada bilaa sabab si aad u heshid lacag kab dheeriya oo hoos imanaya barnaamijka UI ama Xeerka Daryeelka waxay noqonaysaa wax isdaba marin. Hadii aad ku heshid lacagahan kabka ah musuqmaasuq, kuma haboonaan doontid lacago kaba oo dheeriya, waa in ay dib u bixiyaan lacagaha, waxaana qabanaya xukunka danbiyada ee hoos yimaada qeybta 1001 ciwaanka 18, Xeerka Mareykanka.
Beer abuurka ku talo galka ah ee soo warinta dakhliga uu helay todobaadka go'an qof helaayey caymiska shaqo a'aanta waxa ka dhalan kara in lagugu helo wax isdaba marin, ka saaris kabka lcagaha, iyo lacago dheeriya, intaasi waxa dheer ciqaabo kale iyo xukunka danbiyada waaweyn.
MACLUUMAADKA MUHIIMKA AH EE SHEEGTAHA
Waajibaadka caawinta ilmaha waa in loo jaraa lacagaha FPUC si la mida in yihiin heli caymiska shaqo la'aanta oo joogto ah.
Lacagaha FPUC waa la cashuurayaa. Lacagahani waxa lagu dari doonaa 1099G oo aad heli doontid sanad cashuureedka 2020. Cashuuraha waxa laga joojin doonaa lacagaha FPUC hadii aad dooratay in cashuuraha laga saaro kabka caymiska shaqo la'aanta.
Shaqaaleysiiyayaasha lagama qaadi doono lacagaha kabka ee la siiyo shaqaalaha helaaya FPUC.
Hadii aad shaqo siisid shaqaalaha markuu dhamaado xanuunku oo shaqaalahaaguna diidaan in ay kusoo noqdaan shaqada, waa ka ogeysiisaa Horumarinta Shaqaalaha halkan: https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/job-offer-decline-form-employers
Shaqaaleysiiyayaashu waa in ay hubiyaan in ay hada si degdega usoo buuxiyaan warbixinoohaaga caymiska shaqo la'aanta saddex biloodlaha ah si ay shaqaalahoodu u helaan lacagta kabka ah sida ugu dhakhsaha badan uguna macquulsan.
Shaqaaleysiiyayaashu waa in ay ka jawaabaan dhamaan Fariimaha Dadka Cabanaya (65-5317) ama Fariimaaha SIDES hadii cabasho lagasoo gudbiyo qof aan u shaqeynen sababo aan ahayn COVID-19.
Shaqaaleysiiyayaashu waa in ay ka jawaabaan dhamaan Fariimaha Cabashada (65-5317) ama fariimaha SIDES si usoo gudbiyaan lacag la siinayo qof xanuun ku maqan ama lacagaha la siinayo qof wax kale ku maqan.
MACLUUMAAD SHAQAALAHA/XOOGSATADA UU SAAMEEYEY COVID-19
Hadii aanad u shaqeyneyn COVID-19 awgii, waa inaad soo gudbisaa cabashadaada codsiga caymiska shaqo la'aanta online si aad u heshid foomkasta oo caymiska shaqada ah.
Cabashadaada dibaa loo eegi doonaa si loo go'aamiyo inaad ku haboon tahay FPUC. Hadii aad ku haboon tahay lacag kab gobol ama fadaraal todobaad kasta laga bilaabo Maarij 29, 2020 ilaa Julaay 25, 2020 waxaad ku haboonaan doontaa lacagaha FPUC.
Markaad lacag ka helaysid barnaamika FPUC, waxaad wali u baahan doontaa inaad soo sheegto kab lacagtaada todobaad laha todobaadkasta lagu siinayo. Waxaa lagaa lagugu siin doonaa dariiqo isku mida oo lagugu siin jiray kabkii lacagihii hore.
KU HABOONAAN SHAKHSIGA
Si aad ugu haboonaatid kabka lacagta ee Magdhowga Kabka Shaqo la'aanta Fadaraalka, shakhsigu waa inuu:
Ku haboonaataa barnaamijka caymiska shaqo la'aanta gobolka ama fadaraal iyo
Ku haboonaataa ugu yaraan $1 barnaamijka caymiska shaqo la'aanta, ama
Lacagta shaqo la'aanta oo dhan waa la joojin doonaa si loo yareeyo saameynta lacagaha dheeraadka ee aan wax isdaba marinta ahayn.
Awoodid una diyaar tahay shaqo oo aad si firfircoon u raadinaysid shaqo, ilaa oo aanad awoodin inaad sameysid sidaasi iyadoo ay ugu wacan tahay sababaha la xidhiidha COVID-19.
Dhameystirtaa oo aad haystaana kayd shaqo baadhistaadhitaanada shaqo loogu baahan yahay kabkaaga)
Ka warbixi dhakhli kasta oo aad heshay intii lagu jiray todobaadkii kabka. Dakhliyada la daboolay waxa ka mida, lakiin aan ku koobneyn, mushaharaadka, wakhti xanuunka lagu maqan yahay lacagiisa, wakhtiga dalxiiska, iyo fasaxa.
Hadii aanad marhore sidaasi sameyn, ku gudbi sheegashada kabka nlaayn https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/file-claim-unemployment-insurance-benefits
Hadii aad baryahan gudbisay sheegasho caymis shaqo la'aanta, kabka lacagaha FPUC ayaa lagu dari doonaa todobaadyada shaqo la'aanta mustaqbalka mark waaxdu dejiso barnaamijka. Ka dib taariikhda dhaqan galinta barnaaijka, dib celinta lacagaha ayaa lasoo saari doonaa hadii aad ku haboon tahay.
Sheegashada Lacaga kabka todobaadlaha ah: https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/file-weekly-continued-claim
SAACADAHA LA GUDBINAYO SHEESHAGADA TODOBAADLAHA AH
Axada - 8:00 am iaa 7:30 pm
Isniinta ilaa Jimcaha - 8:00 am - 5:30 pm
Su'aalaha u gaarka aha sheegashadaada, fadlan la xidhiidhuiclaimshelp@iwd.iowa.gov ama nagasoo wac 866-239-0843.